Chii The Best Chocolate Stores In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > Chii The Best Chocolate Stores In Europe
The kondinendi European zvinowanzodavirwa raizivikanwa zvinoshamisa uye zvinonaka chokoreti. Saizvozvo, chocoholics zhinji kuti vanakidzwe aifamba Taurai kuti vaiva nomukana kuravidza zvimwe zvinoshamisa siyana munzendo dzavo. Kana uri kuita nzira yako kuburikidza Europe uye rumbidza chokoreti, tine nhau zvikuru iwe! Save A Train akatarisa European Chocolate Chiitiko uye akaisa pamwe mazita 10 yakanaka chokoreti zvitoro mu Europe. Unofanira kuwana uri imwe munyika idzi, uye iwe kuwana kukara vamwe zvinoshamisa chokoreti, tora nguva kushanyira imwe yenzvimbo idzi. Iwe haangaodzwi mwoyo.
1. Best Chocolate Stores In Paris – Debauve uye Gallais
France ndeimwe zvikuru yavose sezvavakatarirwa nyika nokuda kwayo chokoreti. Uri chokwadi kuona zvakawanda chokoreti muzvitoro ndichireurura nzira yako mumigwagwa guru. Saizvozvo, unganzwa akawandirwa ukasangana uwandu chokoreti zvitoro. Nechokwadi waunowana akanakisisa Paris ane pfupiro, takabvunza kumativi kuti vanofanira kushanya chokoreti shop Paris. Vazhinji akapindura kuti chinofanira Debauve uye Gallais. Ichi naka chitoro hakusi chete mukuru muguta, asi chinhu chaiwo. Chakazarurwa ari 1800s uye zvakasikwa zvinonaka chokoreti Dzavose kubvira. Saizvozvo, vakanga guru apo vakazarura kuti akava chokoreti bhizimisi nokuti French Court uye Napoleon. Vatungamiriri vakawanda zvikuru French vakanakidzwa chokoreti yavo, uye saka unogona.
Kana totaura Italy, vazhinji pamusoro Viziovirtù sezvo kunofanira kushanya nzvimbo vanoda chokoreti. Akakurumbira chitoro iri pakati Venice uye ari chocoholics hope. Zvose muchitoro chiri dzakaitwa nemaoko nezvakanakisisa pakugadzira iripo. Zvinodzidzisa musanganiswa rinoshamisa zvadzinofarira uye inofadza Venetian mhepo yakakwana. Saizvozvo, uzivi hwavo kumativi chokoreti zvinonakidza. Vanotevera nemakwenzi uye raanoziva zvose ruoko. Sangana kuti pamwe chete akanakisisa pakugadzira, uye une kunofanira kushanya nzvimbo mumoyo Venice.
The Netherlands Kazhinji hazvina nzvimbo yokutanga kuti chinouya mupfungwa PAUNOFUNGA Chocolates. zvisinei, kuchiri nzvimbo huru kuravidza vamwe zvakanakisisa Chocolates munyika. Chimwe chezvinhu dzakakurumbira muzvitoro kuri muAmsterdam. Vanroselen ari munhu anofanira kushanyira nzvimbo munhu vachitsvaka kuedza kirasi nyika chokoreti. Zvose kwavo chitoro chiri dzakaitwa nemaoko, combining chocolate with various fruits and herbs to create unique and mouth watering treats.
Kana uri achipfuura Luxembourg, nechokwadi kumisa iyi inoshamisa Chocolate chitoro kuti yava zita munyika yose. zvisinei, chepakutanga ndiye Chocolate House pamusoro Luxembourg riri pakatarisana Grand ducal Palace, uye ndiko kumusha vamwe zvakanakisisa chokoreti zvisikwa munyika. Zvayaiva pedyo youmambo, unogona kuva nechokwadi wavanotipa chete akanakisisa. Nakidzwa chiitiko vokudenga nevamwe yakanaka siyana munyika.
Kana nokusingaperi tora remba kuburikidza vapfumi kudunhu Hietzing muVienna, kubhadhara kushanyira Xocolat Manufaktur. In ichi naka chitoro, unogona kuwana mamwe yakanaka chokoreti mu Europe. Anounzwa girazi casing vose vaone, unogona kuona mamwe vakanatswa akasiyana chokoreti munyika. Unogona kuenda ikoko kunakidzwa Chocolate kana kupinda musangano uye kudzidza zvishoma pamusoro unyanzvi rokuita chokoreti.
Kana uri kutsvaka chitoro chiri akapfuma munhoroondo uye kuravira, zvino tarisa mberi pane Erich Hamann muna West Berlin. zvinhu zviviri kuti ichi chitoro dzibude. Chekutanga, ndicho nhoroondo zvinoshamisa muchitoro pachayo. Mikoko shure 1928, uye riri panzvimbo Bauhaus maitiro chivako vakapunyuka hondo yenyika yechipiri. chepiri, ndiko kukudzwa kwavo kwetsika uye kuravira kukuru. Vachine chepakutanga yokuwana kubva zvitoro hwomukova uye norudo ritaure rima chokoreti. zvisinei, ivo kunyange kupa chena chocolate nezvimwe siyana siyana. Dzavo chokoreti omuti ndiyo hurukuro reguta, saka iva nechokwadi kuzviita kana kushanyira chitoro.
Belgium pakati chakanakisisa kana totaura unyanzvi rakasikwa chokoreti. Kufamba kuburikidza Belgium maguta, muchaona yakawanda yemachikichori sezvimedu vanoonekwa. Mumwe yakanakisisa nzvimbo kuti naka chokoreti iri The Chocolate Line muna Bruges. The chitoro kunotodiwa kushanya nokuti munhu kuti anonakidzwa chidimbu chokoreti wakanaka. Pane yakawanda zvetsika siyana uye yakawanda kunonakidza uye experimental Chocolates kusarudza kubva. Chii chinoita Chocolate Line dzibude muitiro yavo pakuita chokoreti. Vanoita chokoreti kururamisa kubva bhinzi uye specialized zvokushandisa vachikuya nokusanganisira ari chokoreti. nguva Next muri Bruges, tora nguva kunakidzwa zvinoshamisa siyana uye nemasango ruzivo pa The Chocolate Line.
Switzerland ndiyo inozivikanwa kwayo chokoreti. Saizvozvo, tinogona kupona mukaka chokoreti kuna Swiss. Kamwe usvike kunyika, uchaona kuti chokoreti kwose kwose. Chinenge nzvimbo dzose iwe kuenda uzere chokoreti muzvitoro kupa nokuruma kudya. Kana uchida kuwana zvakanakisisa Switzerland ane pfupiro, vazhinji vanobvumirana kuti Max Chocolatier ndiro nzvimbo yakakwana kushanyira. Zviri munharaunda kufarira, uye nokuda kwechikonzero chakanaka. Vanoshandisa pamusoro unhu zvinhu uye kubudisa dzimwe yakanaka chokoreti kuSwitzerland. Vanewo yakasiyana, mana mwaka Muterere inoita mumwaka chokoreti siyana. In mhedziso, unogona kuona zvakasiyana siyana vanofarira, zvichienderana kana iwe vanoshanyira chitoro.
Zurich kuna Lucerne Zvitima
Bern kuna Lucerne Zvitima
Geneva kuna Lucerne Zvitima
Konstanz kuna Lucerne Zvitima
9. Best Chocolate Stores In muBudapest – Chocolate Rozsavolgyi
Hungary ndiye dombo rinokosha chocoholics zvakavanzika. Vanoita zvakasiyana-siyana zvinoshamisa zvokuseredzera, uye Chocolates dzavo siyana nezvimwe. A anofanira kushanyira kunakidzwa chaizvo chokoreti iri Chocolate Rozsavolgyi muBudapest. Rinopa yakawanda zvinozipa inobata uye, Chikurukuru, zvinoshamisa chokoreti zvakasikwa. chokoreti yavo yakawana mukurumbira dzakawanda kwavo chokoreti bonbons, uye kana iwe kuidza, zviri pachena nei. vapfumi, nemachira zvinofadza sezvimedu vari vokudenga. Regai nokuda kana uri parwendo kuna Budapest.
Last kwedu mazita 10 Best Chocolate Stores In Europe ndiyo Sprungli. Kana uri kutsvaka nzvimbo rinosanganisa ari dzekare pfungwa chokoreti Swiss, tarisa mberi pane Sprungli muna Zurich. The chitoro yakavhurwa 1859 uye akaita zvinoshamisa, handcrafted chokoreti zvakasikwa kubvira. Kana uchida kuona chokoreti kukuru yakabereka kubva etsvo zvinhu, kushanya Sprungli.
In mhedziso, Europe ndiyo nzvimbo yaifadza munhu kutsvaga yakanakisisa chocolate yakanakisisa chokoreti zvitoro kana bedzi choco feni.
Wagadzirira kuona chocoholics paradhiso munguva yako inotevera rwendo kuburikidza Europe? Book A Train Ticket dzako achida kuenda uye vanowana zvose zvavanazvo pfupiro.
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Best Chocolate Stores In Europe” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-chocolate-stores-europe/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#candyshop #zvitoro chokoreti europetravel Foodie